Baolina kitra- « UFFOI 2019 » :: Hanomboka anio ny fitiliana ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena • AoRaha
Baolina kitra- « UFFOI 2019 » Hanomboka anio ny fitiliana ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena
Handray anjara amin’ny fifaninanana baolina kitra ho an’ireo firenena eto amin’ny ranomasimbe Indianina na « Union des fédérations de football de l’océan Indien » ny ekipam-pirenena malagasy. Hotanterahina amin’ny 5 ka hatramin’ny 15 novambra 2019 any Maorisy ny fifaninanana raha ny nambaran-dRakotoarimanana Henintsoa na i Tota, filohan’ny ligin’Analamanga. Ireo mpilalao lehilahy sokajy latsaky ny fito ambin’ny folo taona no handrafitra ny delegasiona malagasy amin’ny fifaninanana. Hanomboka anio eny amin’ny kianjan’i Mahamasina amin’ny 1 ora ny lalao hitiliana ireo zazalahy misongadina eto an-toerana na anaty klioba na tsia.
“Tsy mifidy mpilalao izahay. Afaka mandray anjara amin’ izany fihaonana fitiliana izany na mpilalao anaty klioba na tsia, na avy eto Analamanga na avy any amin’ny faritra hafa”, hoy hatrany Rakotoarimanana Henintsoa, filohan’ny ligin’Analamanga mandray an-tanana ny fifaninanana fitiliana.
Mitohy hatrany, hoy izy, ny fifaninanana mandra-pahazo an’ireo mpilalao tena handeha any Maorisy. Rakotomanga Pierrot no hijery ireo mpilalao mendrika sy misongadina miaraka amin’ireo mpanazatra mpilalao zandriny eto Analamanga.
Ratsimbaniaina dit :
Araka ny vaovao dia efa nanomboka io fitiliana ny ho ekipa teo amin’ny ankizy latsaky ny 18 taona io. Ny zanakay tompoko, dia isany niatrika io test io, te ahafantatra ny momba ny tohiny lalao satria omaly alarobia 16 octobre dia nasaina niverina izy dia tsy hita ny mpitarika tao Mahamasina dia niveri-maina izy satria tsy hitany ny tohiny fifanitsanana???
Maniry ka maniry mba ahazo fanazavana fanampiny fa amin’ny maha- tanora saina azy dia tsy hitany izay ambara, tompoko.
Baolina kitra – Lalao ara-pirahalahiana :: Foana ny fifandonana tokony hataon’ ny Barea sy ny Club M Maorisy